lower abdominal exercises: contoh surat lamaran kerja bahasa inggris
contoh surat lamaran kerja bahasa inggris n'okpuru ebe a nwere ike izo aka na unu ndị chọrọ maka ọrụ dị ka onye educator ma ọ bụ onye nkụzi . N'ezie ọtụtụ ndị chọrọ ịbụ onye nkụzi , karịsịa obodo ohu. Ruru na ọnọdụ , kwenyere na -eweta ọganihu ya ndụ. N'eziokwu, ọchịchị na-enye ọdịmma nke ndị nkụzi nwere ọnọdụ obodo ohu site n'inye nke nkiti ụgwọ ndị ọzọ kwesịkwara iburu n'uche na .
Ị na-ebi ndụ idetuo Lamara sample leta n'okpuru wee hazie gị onwe data gị . Echefukwala itinye na-akwado faịlụ nke mere na i nwere ike a ga-anabata ka onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ ewumewu na ị chọrọ . Ọ bụrụ na ị na- eme atụmatụ ime dị ka onye nkụzi , ị pụrụ ịhụ otu sample cover leta n'okpuru dị ka a kwuru okwu ya .
Na ekele ,
M ugbu a ka ngwa maka oru ngwa ka a andikpep ụgwọ ọnwa ke Mr / anabata Enyemaka ụzọ , dị ka nke onwe m data dị ka ndị a :
Name: Zabir ọc Ahsan S.Pd
Ebe Ụbọchị Ọmụmụ: Berastagi , March 15, 1985
Okike : Nwoke
Okpukpe : Islam
Ikpeazụ Education : S -1 English Ngalaba
Okwu : Jl . Rose uzo warawara , 91 Banyuwangi
Dabere n'elu, ka m bu n'obi ime ka ọrụ na- otu onye nkụzi nọ n'ụlọ akwụkwọ ụgwọ na Mr / anabata Enyemaka mbu taa. N'ihi na gị echiche, m itiba :
1. Photo oyiri nke ikpeazụ ubre 1 mpempe akwụkwọ
2. Photo oyiri nke transcript nke akara ule 1 mpempe akwụkwọ
3. Photo oyiri nke njirimara kaadị 1 mpempe akwụkwọ jobseekers
4. Detuo nke ID kaadị 1 mpempe akwụkwọ
5. Foto nke 3 x 4 cm 2 iberibe
N'ihi ya, m kere cover leta n'eziokwu , n'ihi na gị na uche na amamihe nke Mr / anabata Enyemaka m na-ekwu na ọtụtụ daalụ.
Mfe ma dị nnọọ irè ọ bụghị ya? Dị idetuo na maa -anọ n'elu akwụkwọ na i nwere ike inwe ọrụ ọhụrụ ngwa leta ozugbo akwụkwọ ị na -eziga ya n'ụlọnga na ị na- aga . Olileanya ihe ịga nke ọma ma jisie employess Job Ngwa Akwụkwọ Ozi ịlele Onye Ozizi n'elu